May 2013 | IT Sharing Network
မင်္ဂလာပါ... Windows တင်နည်း လေ့လာလိုတဲ့ သူများအတွက် XP+ Vista+7 တင်နည်းမြန်မာလိုစာအုပ် (၅) အုပ်ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... တစ်အုပ်ဖတ်ယုံနဲ့ ကိုယ်တိုင်တင်တတ်သွားမှာဖြစ်ပေမယ့် တောင်းထားတဲ့ ညီငယ်ရော အခြားလေ့လာလိုတဲ့သူများအတွက်ပါ အဆင်ပြေစေရန် Windows တင်နည်း စာအုပ် (၅) အုပ်စလုံးကို တစ်ခါတည်း စုစည်းပြီး Sharebeast, Dropbox, Zippyshare သုံးနေရာတင်ပေးထားပါတယ် ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... ဗီဒီယိုချက်သမားများအတွက် ရုပ်ပြောင်ပုံလေးတွေနှင့် လန်းနိုင်ရန် WebcamMax 7.7.6.2 ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... အသေးစိပ်သလိုလျှင် http://www.webcammax.com ကို Click ပြီးမူရင်းဆိုက်မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Keygen + Patch ပါဝင်ပြီး အသုံးပြုလိုတဲ့ သူများအတွက် Sharebeast မှာတင်ပေးထားပါတယ်...
WiFi Pass Recovery & Backup (Android မှာ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ wifi passowrd တွေကိုပြန်ကြည့်ရန်)
မင်္ဂလာပါ... မိမိ Android ဖုန်းမှာ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခဲ့ WiFi Password တွေကို ပြန်ကြည့်ချင်သူများအတွက် WiFi Pass Recovery & Backup ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... တစ်ချို့ Wifi Free ဆိုင်တွေတစ်ချို့မှာ wifi လွှင့်ပေးထားပေမယ့် password ပေးထားပြီး အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် password ကိုမပြောပဲ ဆိုင်မှ မိမိဖုန်းထဲကို password ရိုက်ထည့်ပေးပါတယ်... အဲ့လိုအခါမျိုးမှာ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကို ဖွင့်လိုက်ယုံနဲ့ မိမိချိတ်ဆက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ wifi password တွေကို ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်... ဆိုင်ရှင်တွေက ဒီလိုဆော့ဝဲလ်မျိုးတင်ထားရင် password ထည့်မပေးဘူးဆိုလည်း ဆော့ဝဲလ်ကိုဖြုတ်ထားပြီးမှ ဖုန်းကိုပေးလိုက်ပါ... Password ရိုက်ထည့်ပေးပြီးမှ install ပြန်လုပ်လိုက်ပါ install မလုပ်ခင်ချိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ wifi password တွေကိုပါဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်... အသုံးပြုလိုသူများအတွက် Sharebeast မှာတင်ပေးထားပါတယ်...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... ကွန်ပြူတာ Hang ခြင်းမဖြစ်စေရန်အတွက် Process Lasso Pro 6.0.1.88 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတ်... ဒီ Process Lasso လေးက ကွန်ပျူတာရဲ့ CPU Speed ကိုမြန်ဆန်အောင် CPU ကို စွမ်းရည်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီး ကွန်ပျူတာ Hang ခြင်း၊ Not Responding ဖြစ်ခြင်းစသည်တို့ကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်... ဒါအပြင် မလိုအပ်တဲ့အချိန်တွေမှာ CPU အလုပ်လုပ်ခြင်းကို လျှော့ချပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် CPU ကိုသက်သာစေပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Keygen နှင့် Patch နှစ်မျိုးစလုံးထည့်ပြီး အသေးစိပ်သိလိုလျှင် http://bitsum.com/index.php ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်....... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Sharebeastr မှာတင်ပေးထားပါတယ်....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Angry Birds ချစ်သူများအတွက် Angry Birds Space 1.4.0 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အပြည့်အ၀ ကစားနိုင်ဖို့လိုင်စင်အတွက် Patch ဖိုင်ပါဝင်ပြီး Sharebeast မှာ တင်ပေးထားပါတယ်....
Granny Smith v1.3.1 APK (ဘွားဘွားကြီး စကိတ်စီးတဲ့ဂိမ်း)
မင်္ဂလာပါ... ဘွားဘွားကြီး ကို့ရို့ကားရားနဲ့ စကိတ်စီးတဲ့ဂိမ်း ကစားလို့ကောင်းသလို ရီရပါတယ်... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mediocre.grannysmith ကို click ပြီး Google Play မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်... ကြိုက်နှစ်သက်ရင် အောက်ကလင့်မှာ Download ယူနိုင်ပါတယ်...
မင်္ဂလာပါ... ဇာတ်လမ်းဂိမ်း ကြိုက်တဲ့ သူများအတွက် (APK+OBB) နှစ်ခုစလုံးပေါင်းတင်ပေးထားပါတယ်.... Google Play မှာ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jumpgames.afterearth ကို click ပြီး လေ့လာနိုင်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်လျှင် အောက်ကလင့်မှာ Download ယူနိုင်ပါတယ်....
Riptide GP v1.6.2 APK (စပိဘုတ်ပြိုင်ရင်း ဖိုက်ရတဲ့ဂိမ်း)
မင်္ဂလာပါ.... စိပိဘုတ်ပြိုင်မောင်းရင်း ဖိုက်တင်ချရတဲ့ Riptide GP v1.6.2 ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အသေးစိပ်လေ့လာလိုလျှင် https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vectorunit.blue ကို Click ပြီး Google Play မှာလေ့လာနိုင်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရင် အောက်ကလင့်မှာ Download ယူနိုင်ပါတယ်...
Super Hide IP 3.3.1.8 (အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် IP Hide ချင်သူများ)
မိုဘိုင်းမျိုးစုံ Root လုပ်နည်းနှင့် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... အာကာဖြိုး (နည်းပညာ) ရေးသားထားတဲ့ မိုဘိုင်းမျိုးစုံ Root လုပ်နည်းနှင့် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ စာအုပ်ကို အရင်ကတင်ပေးပြီးသားပါ လင့်သေသွားလို့ ပြန်တင်ပေးဖို့ တောင်းထားတဲ့ အတွက် Sharebeast, Minus နှစ်နေရာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... သန်းထိုက်(ရွှေအရိပ်) ရေးသားပြုစုထားတဲ့ Mobile ကွန်ယက်နည်းပညာ စာအုပ်ကလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Mobile ကွန်ယက်နည်းပညာ စာအုပ်တွင် အခန်း (၆) ခန်းပါဝင်ပြီး ၄င်းကောင်းတို့မှာ အခန်း(၁) စတင်လေ့လာ Mobile နည်းပညာ အခန်း(၂) Mobile ချိတ်ဆက်ခြင်းနည်းပညာ အခန်း(၃) CDMA 800 နှင့်အသုံးချနည်းပညာ အခန်း(၄) GSM/ WCDMA နှင့်အသုံးချနည်းပညာ အခန်း(၅) Internet ဆိုင်ရာအသုံးချနည်းပညာ အခန်း(၆) Mobile တို့၏ လျှို့ဝှက် Key များ စသည်တို့ပါဝင်ပါတယ်.... အရင်ကတင်ပေးပြီးသားပါ လင့်သေနေပြီး ပြန်တင်ပေးဖို့တောင်းထားလို့ လေ့လာလိုတဲ့သူများအတွက် Sharebeast, Minus နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်...
မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ ခုဖော်ပြပေးတဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ မိမိရေးမှတ်တဲ့ Notes တွေကို phot , audio, video ဖိုင်တွေ ပါတွဲမှတ်လို့ရပါတယ်။ မိမိရဲ့ မှတ်ထားတဲ့ မှတ်စုတွေ ကို မိမိပေးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆီကိုလည်း facebook, gmail နဲ့ အခြားသော website တွေကိုလည်း ရှယ်ယာ လုပ်လို့ရပါတယ်။ Online storage တွေပေါ်မှာလည်း Upload တင်ထားလို့ရပါတယ် android os ကိုင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ အတွက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ အောက်ကလင့်လေးမှာဒေါင်းယူကြပါ။
မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ဖိုင်ဆိုက်သေးသေးလည်းနဲ့ အသုံးပြုလို့ကောင်းတဲ့
Antivirus Software လေးပါပဲ Cloud အနေနဲ့လည်းလျှင်မြန်စွာအသုံးပြုပေးပါတယ်။ antivirus တင်မဟုတ်ပါဘူး various malware,viruses, adware, spyware, trojans, keyloggers, rootkits and other malicious ရှာဖွေပြီး ရှင်းလင်းပေးမဲ့အပြင်အကာကွယ်လည်း အပြည့်အ၀ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... AVG သုံးတဲ့ သူများအတွက် နောက်ဆုံးထွက် Version ဖြစ်တဲ့ AVG Internet Security 2013 13.0 Build 3343a6324 ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Anti-Virus ထဲမှာ AVG ဆို သိကြပြီးသားပါ 32 ရော 64 နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Download ယူနိုင်ပြီး လိုင်စင်အတွက် Keygen ပါဝင်ပါတယ် ....
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ...... ကွန်ပျူတာမှာ အသုံးပြုရင်း error ဖြစ်နေတာတွေကို Fix လုပ်ပေးပြီး မလိုအပ်တဲ့ Data အကြွင်းကျန်တွေ အမှိုက်တွေကို ရှင်းလင်းပေးမယ့် FixCleaner v2.0.4680.1059 မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ Click တစ်ချက်နှိပ်ယုံနဲ့ ကွန်ပျူတာရဲ့ error တွေကို ရှင်းလင်းပေးနိုင်ပြီး hand-pick errors, registry နှင့် startup speed တွေကိုပါပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်... Win 8 မှာပါ အသုံးပြုနိုင်ပြီး အသေးစိပ်သိလိုလျှင် http://fixcleaner.com ကို Click ပြီး မူရင်းထုတ်လုပ်တဲ့ဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... လိုင်စင်အတွက် Serial ပါဝင်ပြီး အသုံးပြုလိုတဲ့ သူများအတွက် Sharebeast မှာတင်ပေးထားပါတယ်....
မင်္ဂလာပါ.... ခွေကူးတဲ့ Burning Software ထဲမှာ အားလုံးအသုံးပြုကြတဲ့ Nero Burning ROM 12.5.01900 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... လိုင်စင်အတွက် Crack + Sreial ပါဝင်ပြီး Crack ခြိုးပြီးမှ serial ထည့်ရပါမယ်.... Sharebeast မှာတင်ပေးထားပါတယ်...
မင်္ဂလာပါ... မိမိကွန်ပျူတာမှာ ပြုလုပ်သမျှကို Recorde ပြုလုပ်လိုတဲ့ ဘော်ဒါများအတွက် Zebra Screen Recorder 1.4 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Screen Recorder ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး သူ့ဆိုက်မှာ $19.95 သတ်မှတ်ထားပါတယ်... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် http://www.zebra-media.com/zebrascreenrecorder.html ကို click ပြီး မူရင်းထုတ်လုပ်တဲ့ Site မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Download ဖိုင်ထဲမှာပါတဲ့ Registration ကို click နှစ်ချက်နှိပ်ပြီး လိုင်စင်ယူရမှာပါ... အသုံးပြုလိုတဲ့ ဘော်ဒါများအတွက် Sharebeast မှာတင်ပေးထားပါတယ်...
မင်္ဂလာပါ ခုဖော်ပြပေးမဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ ifivex tab အသုံးပြုတဲ့သူငယ်ချင်းများ firmware ပြန်မတတ်လို့ ကိုယ်တိုင်ပြန်တင်ချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ tab လေးကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးပြီးသားဖြစ်လို့ စိတ်ချလက်ချ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်မဲ့ဖိုင်လေးတွေကိုအရင်ဆုံးဒေါင်းမယ်နော် ပြီးမှ ဆက်ကြမယ်လေ။
Ace Translator 10.6.0.0 (languages တွေကို အပြန်အလှန်ပြောင်းလည်း ဖော်ပြပေးပြီး အသံထွက်ပါဖတ်ပေးနိုင်တဲ့)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Languages တွေကို အပြန်အလှန်ပြောင်းလည်း ဖော်ပြပေးပြီး အသံထွက်ပါဖတ်ပေးနိုင်တဲ့ Ace Translator 10.6.0.0 ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အသုံးပြုနိုင်တာတွေကတော့ ( 65 languages ) ဘာသာရပ် 65 မျိုးကို အပြန်အလှန် ပြောင်းလည်းဖော်ပြပေးနိုင်ယုံသာမက (43 languages) 43 ဘာသာကို ( text-to-speech ) အသံထွက်မှန်မှန်ကန်ကန် ဖတ်ပေးနိုင်ပါတယ်... ဥပမာ Chinese ဘာသာမှ English ဘာသာကို အပြန်အလှန် ဖော်ပြပေးနိုင်သည့်အပြင် အသံထွက် ဖတ်ပေးနိုင်ပါတယ်... အဲ့လိုဖတ်ပေးနိုင်သည့်အတွက် Ace Translator မှာအသုံးပြုနိုင်သော (43 languages ) 43 ဘာသာကို မိမိသိလိုတဲ့ စကားလုံး စကားပိုဒ်တွေကို အသံထွက်သိလိုတဲ့အခါ စကားပြော လေ့ကျင့်လိုတဲ့အခါမျိုးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.... အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပြီး အသေးစိပ်လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် patch ဖိုင်ထည့်ပေးထားပြီး patch ဖိုင်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် Antivirus ကို ပိတ်ထားပေးရပါမယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Sharebeast မှာတင်ပေးထားပါတယ်...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... ကွန်ပျူတာ Speed ကို အကောင်းဆုံးအခြေအနေတရပ်ထိမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ အင်တာနက် စပိမြှင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ Uniblue SpeedUpMyPC 2013 5.3.8.1 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ကွန်ပျူတာလေးလံနေသူများ၊ System ကို ဆောင့်ရှောက်ရေး ထားခြင်းသူများ အတွက် အဆင်ပြေမယ့် software ဖြစ်ပါတယ်... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Serial ထည့်ပေးထားပြီး အသေးစိပ်လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ http://www.uniblue.com/software/speedupmypc/ ကို click ပြီးမူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်.... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Sharebeast မှာတင်ပေးထားပါတယ်...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... USB မှတဆင့် Virus များမ၀င်နိုင်အောင် 100% တားဆီးပေးတဲ့ USB Disk Security 6.3.0.30 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အသေးစိပ်သိလိုလျှင် www.zbshareware.com ကို click ပြီး မူရင်းထုတ်လုပ်တဲ့ Site မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်... တခြား Anti-virus တစ်မျိုးမျိူးတင်ထား သုံးထားရင်တော့ ထပ်သုံးဖို့မလိုပါဘူးခင်ဗျာ.... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox မှာ တင်ပေးထားပါတယ်...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Aung Myint (M.E., Australia) ရေးသားပြုစုထားတဲ့ Excel 2010 By Aung Myint (M.E., Australia) မြန်မာ စာအုပ်ကလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်ကလည်း တင်ပေးထားပြီးသားပါ တောင်းထားတဲ့ Wee Bo နဲ့ အခြားလေ့လာလိုတဲ့ သူများအတွက် အခု Dropbox, Minus, Sharebeast သုံးနေရာ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ ကွန်ပျူတာကျန်းမာရေးအတွက် လေးလံခြင်း၊ Browser ထဲမှ မလိုအပ်တဲ့ အကြွင်းကျန်များ၊ Registry များနှင့် မလိုအပ်တဲ့ အမှိုက်များကိုရှင်းလင်းခြင်း၊ Driver Wiper ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ CCleaner 4.02.4115 Business + Professional ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Install မလုပ်ခင် Internet ကိုဖြုတ်ထားပေးရပါမယ်.... အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့ Crack ပါဝင်ပြီး အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox မှာတင်ပေးထားပါတယ်...
Learning Excel 2007 (Excel 2007 ဖြင့် စားရင်းသွင်းနည်း လက်စွဲ)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Learning Excel 2007 (Excel 2007 ဖြင့် စားရင်းသွင်းနည်း လက်စွဲ) မြန်မာလို စာအုပ်ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်ကလည်း တင်ပေးပြီးသားပါ Minus က ဖိုင်ဆိုက်အဆင်မပြေတော့လို့ Dropbox, Sharebeast မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Learning Work 2007 (ရုံးသုံးကွန်ပျူတာ စာရိုက်နည်း ၂၀၀၇) မြန်မာလို စာအုပ်ကလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်ကလည်း တင်ပေးပြီးသားပါ Minus က ဖိုင်ဆိုက်အဆင်မပြေတော့လို့ Dropbox, Sharebeast နှစ်နေရာ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
Font Installer Pack
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ခုဖော်ပြပေးလိုတဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ ဖုန်းကိုမကြာခဏလဲလည်ပြီးအသုံးပြုတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက်အသုံးဝင်မှာပါ မိမိ data တွေကို sync လုပ်ထားပြီး ပြောင်းလဲ အသုံးပြုလိုတဲ့ ဖုန်းပေါ်ကို data တွေ လွဲပြောင်းဖို့အတွက် အသုံးဝင်ပါတယ် အသုံးပြုရတာလဲ ရိုးရှင်းလွယ်ကူပါတယ် ဖုန်းတော်တော်များများလေးကိုလည်း အထောက်အပံ့ပေးထားပါတယ်။Samsung Galaxy S4, Galaxy S3, Galaxy S2, Galaxy Note / Note2, Motorola Droid, RAZR, Sony Ericsson Xperia, LG Optimus and many other devices. cloud server မှာလည်းသိမ်းစည်းထားခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူး ၊ လေထဲကလဲလွဲပြောင်းယူချင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ usb ကြိုးလေးနဲ့ပဲ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာသိမ်းစည်းထားပြီး ပြန်လည်လွဲပြောင်းပေးမှာပါ။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ..... Facebook အကြောင်း သိကောင်းစရာများ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ဒီစာအုပ်ကလေးကို နည်းပညာစာအုပ်များစွာ မျှဝေ ရေးသားပေးသော ကီးကီး မှ ရေးသားထားတာဖြစ်ပြီး စတင်အသုံးပြုပုံမှအစ သိသင့်သိထိုက်သော အချက်များနှင့် အသုံးပြုနည်းများစွာကို အသေးစိပ် ရေးသားဖော်ပြပေးထားပါတယ်... လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox, Minus နှစ်နေရာ တင်ပေးထားပါတယ်...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... အရင်ကလည်းတင်ပေးဖူးပါတယ် Revo Uninstaller Pro 3.0.5 (Crack + Keygen) လေးထွက်လို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ... ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ကြိုက်လို့ လက်ရှိသုံးနေပါတယ် ... သူ့ရဲ့ Feature တွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားသလို အသေးစိပ်သိလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ http://www.revouninstallerpro.com/index.html ကို click ပြီးမူရင်းဆိုက်မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်.... သူ့ဆိုက်မှာ Tutorials တွေ screenshorts တွေအပြင် အသုံးပြုပုံ pdf တွေပါတင်ပေးထားပြီး Full version ဖြစ်ဖို့အတွက် Patch ဖိုင်ထည့်ပေးထားပါတယ်... တစ်ချို့ software တွေကို uninstall လုပ်တဲ့အခါ restart တောင်းရင် မလုပ်ပဲ safe, Moderate, Advanced ဆိုတဲ့ modes သုံးမျိုးမှာ safe modes ကိုရွေးပြီး scan လုပ်ပြီး မလိုအပ်ပဲကျန်နေတာတွေကို ဖျက်ပြစ်နိုင်ပါတယ်... နောက်တစ်ခု ကြိုက်တာက KBG archiver လိုဖိုင်ချုံတဲ့ ဆော့ဝဲလ်မျိုးကို install လုပ်လို့မရတဲ့အခါမျိုးမှာ Revo Uninstaller လေးနဲ့ Install လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ CCleaner v4.02.4115 Portable ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Portable ဖြစ်လို့ crack, patch တွေ မလိုပါဘူး... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox မှာတင်ပေးထားပါတယ်...
QuickTime Pro နောက်ဆုံးဗားရှင်းလေးကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ အခြားသောသူငယ်ချင်းများက
Quick Time လေးကို အသုံးများတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ။ cyber link က ထုတ်လုပ်တဲ့ power directior လို ဆော့ဝဲလ်မျိုးမှာ Quick Time လေးက မရှိမဖြစ်လေးပါ ip cam တွေ က movie တွေကို ပြန်ကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင်လဲ လိုအပ်ပါတယ် အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ ဒေါင်းလုပ်ယူထားလိုက်ကြပါခင်ဗျာ။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Internet Download Manager 6.15 Build 14 ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်တင်ထားတဲ့ IDM ကို Uninstall လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး..... လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း Uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာ default နေရာမှာ complete ကိုရွေးပေးရပါမယ်.... အောက်မှာလည်အဆင်ပြေအောင် ပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်... ဒီအတိုင်းတင်မယ်ဆိုရင် idman615.exe ကို Run လိုက်ပါ... ထုံးစံအတိုင်း Next ...... Next .... Finsh ပေါ့ဗျာ... အဲ့အတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် IDM ကိုမဖွင့်သေးပဲ patch ဖိုင်ကို ထုံးစံအတိုင်း patch ခြိုးပေးလိုက်ပါတယ်... Internet Download Manager ကို patch ဖိုင်ဖြင့် full version ဖြစ်အာင်ပြုလုပ်အသုံးပြုပုံကို ဒီလင့် မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.... Resume download လုပ်ထားတာတွေလည်း မပျက်ပါဘူး 6.15 Build 14 လည်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်...မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Download Manager ကို Download speed အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ IDM OPTIMIZER (297.85KB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အသုံးလိုမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Internet Download Manager ကို update လုပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် crack လုပ်သုံးလို့ရတဲ့ IDM cracker tool (438.20KB) ကို အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... Registry ထဲကနေ Internet Download Manager ကို download speed မြှင့်တဲ့နည်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် .... IDM မှာမပါတဲ့ apk ကဲ့သို့သော အခြား Files Types တွေကိုဒေါင်းစေချင်ရင် ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox ကနေတင်ပေးထားပါတယ်....
ခုဖော်ပြပေးမဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးက viber , tango, cuibe တို့လို free call အသုံးပြုလို့တဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။အသံလည်းကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိပါတယ်။ code မတောင်းရပါဘူး။ facebook account ရှိဖို့ပဲလိုပါတယ်။ အကောင့်ရှိတဲ့ဆိုရင်တော့ သူငယ်ချင်းအချင်း free call ကိုအသုံးပြုလို့ရပါပြီ။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Laptop ပိုင်ရှင်များအတွက် အသုံးဝင်မယ့် BatteryCare 0.9.14.0 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.... BatteryCare isasoftware created to optimize the usage and performance of the modern laptop’s battery. It monitors the battery’s discharge cycles and helps increasing it’s autonomy and improving its lifetime.